माओवादीलाई किन आत्महत्या गराईंदैछ ? « Bikas Times
माओवादीलाई किन आत्महत्या गराईंदैछ ?
समकालीन नेपाली नेताहरुमा सबैभन्दा वाठो नेता प्रचण्डलाई मानिन्थ्यो । प्रचण्डभन्दा वाठो ठहरिए केपी ओली । चलनचल्तीको भाषामा भन्नुपर्दा प्रचण्डलाई ओलीले थाङनामा सुताइदिएका छन् । प्रचण्ड र माओवादीलाई ओलीले जति शायद कसैले प्रहार गरेका छैनन् । ओलीले जनयुद्ध सुरु हुनु अघि देखि नै माओवादीलाई कडा प्रहार गरे । जनयुद्धपछि झन तिब्र प्रहार गरे । एमालेका अन्य नेताहरु माओवादीप्रति नरम भाषा बोलिरहँदा पनि ओली कडा भाषा प्रयोग गर्थे । जनयुद्ध सकिएपछि माओवादीको ‘दुश्मन नम्बर एक’ कोही थियो भने ओली नै थिए । ओलीले जति माओवादीको आलोचना नेपालमा शायद अरु कसैले गरेका छैनन् ।
प्रचण्डलाई किन वाठो मानिन्थ्यो भने उनले पार्टीभित्रका दिग्गज र बुढा नेताहरुलाई पाखा लगाएर महामन्त्री पद हात पारे । जनयुद्ध सुरु गरे । जनयुद्धमा पनि चातुर्य प्रदर्शन गरे । जनयुद्धको अवतरण गराउन पनि उस्तै जोखिमपूर्ण चातुर्य प्रयोग गरे । पछि चुनावमा पनि त्यसरी नै वठ्याईं गरे । एमालेलाई साइजमा ल्याए । कांग्रेसलाई एक नम्बर पार्टीबाट दुई नम्बरमा झारिदिए । संसदीय खेल मैदानमा पनि उस्तै कौशल प्रयोग गरे । आफू बिना राज्यका कुनै निर्णय नहुने अवस्था सिर्जना गरे । ठूलो सफलता हासिल गरे ।
संविधान बनेपछिको चुनावमा भने प्रचण्डले ओलीसँग मात खाए । ओलीले पार्टी एकीकरण, पार्टी अध्यक्ष अनि आलोपालो प्रधानमन्त्रीको ललिपप देखाइदिए । ओलीको कपटपूर्ण विगत बिर्सिएर प्रचण्ड लोभिए । यहाँबाट प्रचण्ड चुक्न थाले ।
पार्टी एकीकरण गर्ने भनेर ओलीले माओवादीलाई चालीस प्रशितत सीट दिए । प्रचण्डले चित्त बुझाए । चुनाव परिणाममा माओवादी ३० प्रतिशतमा झर्यो, एमाले ७० प्रतिशतमा उक्लियो । चुनावी ट्याक्टिसमा ओलीले प्रचण्डलाई जिल्ल पारे । चुनावपछि ओली बलियो भए, प्रचण्ड कमजोर भए । ६० र ४० को भागवण्डालाई ओलीले ७० र ३० प्रतिशतको भागवण्डा बनाए ।
पार्टी एकीकरण गर्न ओली र प्रचण्ड दुवै सहमत भइसकेका छन् । यो सहमति देखाउने दाँत जस्तो मात्र भएको छ । ओलीको दाउ छ, प्रचण्डको भागमा पार्टी केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत नपुगोस् । ४० प्रतिशत भयो भने प्रचण्डले भविष्यमा पार्टी फुटाउने हैसियत राख्छन् । ४० प्रतिशत पुग्न नदिई एकीकरण गरियो भने प्रचण्डलाई आगामी दिनमा झन खुम्च्याउन सकिन्छ भन्ने ओलीले बुझेका छन् । यो कुरा प्रचण्डले नबुझेका होलान् ? सर्वत्र प्रश्न उठिरहेको छ । राजनीतिका चतुर खेलाडि प्रचण्डले ४० प्रतिशत हिस्सा नलिई ओलीसँग आत्मसर्मपण गरेर एकीकरण गर्लान् भन्ने विश्वाश धेरैलाई छैन ।
यो कालखण्डमा ओलीले भारत र चीन दुवैसँग सम्बन्ध सुधारे तर प्रचण्डको चाहिँ सम्बन्ध बिगारिदिए । प्रचण्डलाई उनीहरुको नजरमा अविश्वशनीय बनाइदिए । देशभित्र पनि प्रचण्डको छवी अविश्वशनीय बनाउन ओली र एमाले भित्रको ओली गुटले प्रयाश गरिरहेको छ । कि ३० प्रतिशत हिस्सा लिएर एमालेमा पस्नुपर्ने, कि अविश्वशनीय र बेइमानको विल्ला भिर्नुपर्ने अवस्थामा फसेका छन् प्रचण्ड ।
आगामी दिनमा ओलीले प्रचण्डलाई अरु फसाउँदै जान सक्छन् । पार्टी एकीकरण भयो भने ओली सफल, एकीकरण भएन भने प्रचण्ड बेइमान हुने अवस्था सिर्जना गरिएको छ । संघीयता, धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र, समावेसीकरण जस्ता एजेण्डा ल्याउन प्रचण्डको नेतृत्वदायी भूमिका छ, ओली यसका विरोधी थिए र अझै घुमाउरो विरोध गरिरहेका छन् । आफूले देशमा स्थापित गरेका एजेण्डा पनि एकीकरणको नाममा एमाले र ओलीको पाउमा चढाउन जाँदैछन् प्रचण्ड । गर्लान् त प्रचण्डले पाउमा चढाउने काम ? इमानदार कम्युनिष्टहरु, गणतन्त्र र संघीयता ल्याउन संघर्ष गरेकाहरुले प्रश्न गरिरहेका छन् ।
ओली र भारत
प्रधानमन्त्रीका रुपमा केपी ओलीको भारत भ्रमणपछि नेपाली राजनीतिमा, खासगरी एमाले र माओवादीको एकीकरणमा के असर पर्छ भन्ने प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । ओलीले जसरी देशभित्रका शक्तिहरुलाई खेलाए, जसरी माओवादीलाई एमालेमा विलय गराउने परिपंच मिलाए, त्यो हेर्दा उनले भारतलाई पनि नखेलाउलान् भन्न सकिन्न । नेपाली राजनीतिमा भारतको प्रभाव कति छ भन्ने विगतमा देखिएकै हो । भारतीय प्रभाव आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्न ओलीले कुनै कसर बाँकी राख्दैनन् ।
विगतमा आफ्नो ‘सत्रु नम्बर एक’ माओवादी र प्रचण्डसँग यसरी मिल्न सक्ने ओली भारतसँग पनि मिल्न सक्छन् । यसको लक्षण देखिन थालिसकेको छ । कोशी उच्च बाँधदेखि अन्य अनेक परियोजनामा ओलीलाई सहमत गराउन भारतले प्रयास गरिरहेको छ । यसका लागि ओलीसँग दुई तिहाई बहुमत हुन आवश्यक छ । माओवादी र प्रचण्डलाई सिध्याएर एमालेमा विलय गरायो भने मात्र ओलीसँग दुई तिहाई पुग्ने अवस्था आउनेछ । त्यसैले भारतले पनि प्रचण्ड र माओवादीको वली चढाएर ओलीलाई बलियो बनाउने बाटो लिन सक्छ । यो सबै खेलबाट प्रचण्ड बेखबर होलान् त ?
जनयुद्धको बेला विशाल आकार लिएको माओवादीको जमिनमा अवतरण गर्ने उपाय थिएन । यस्तो बेला उसले लोकतान्त्रिक बाटो लियो । शान्तिपूर्ण बाटोमा आयो । आज देशमा जेजस्तो एजेण्डा स्थापित भएका छन् त्यसमा माओवादीको महत्वपूर्ण भूमिका छ । भविष्यमा यसको लाभ माओवादीले लिन सक्ने अवस्था छ । कांग्रेस र एमाले सरह देशव्यापी संगठन छ । प्रचण्डपछि दोस्रो पुस्ताका नेताहरुको सक्षम टिम छ । अहिले तेस्रो पार्टी भए पनि भविष्यमा पहिलो हुनसक्ने यावत सम्भावना बोकेर बसेको छ । तैपनि किन एमालेमा विलय भएर आत्महत्या गर्न गइरहेको छ ? यो प्रश्न बुझिनसक्नु भएको छ ।
अर्काे प्रश्न हो– माओवादी जस्तो शशक्त पार्टीलाई आत्महत्या गराएर त्यसको लाश एमालेमा प्रवेश गराउन ओलीले कसरी सके ? कसरी डिजाइन बनाए ? आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थामा माओवादी पुगिसकेको थियो ? अहँ थिएन । तैपनि किन माओवादीलाई आत्महत्या गराईंदैछ ? माओवादीका हरेक कार्यकर्ताले यो प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्छ र आम नागरिकले पनि खोज्नुपर्छ ।